कोरोनाभाइरस को समयमा यात्रा को लागी आधारभूत सल्लाह यात्रा समाचार
कोरोनाभाइरस को समयमा यात्रा को लागी आधारभूत सल्लाह
सुसाना Godoy | | गेटवे
सबै सावधानीहरू आधारभूत हुन् र हामी यो जान्दछौं! त्यसकारण, जहिले पनि सबै उपायहरूको सम्मान गर्दै, हामी त्यो यात्रा पूरा गर्न सक्दछौं जुन हामीले महिनौं देखि योजना गर्दै आएका छौं। जहाँसम्म मानिसहरू छन् जो अझै आफ्नो क्षेत्र बाहिर एक कदम चाल्न हिम्मत छैन, धेरै अरूले आफ्नो झोला प्याक गर्न छनौट गरे। त्यसैले यो लेख्न सजिलो छ यात्राको लागि आधारभूत सल्लाहहरू.
तपाईंको रोजाई जस्तोसुकै भए पनि हामीले लिनु पर्ने कदमहरूको एक श्रृंखला सम्झनुपर्दछ, यद्यपि हामी आफैले योग्य भएको रूपमा रमाउन सक्छौं। किनकि छुट्टिहरू आउँदैछ र हामी सकेसम्म सकेसम्म विच्छेदन गर्न आवश्यक छ। के तपाईं एक यात्रा मा जाँदै हुनुहुन्छ जस्तो कि तपाईंलाई बेला बेलामा दिमागमा थियो कोरोनाभाइरस?
1 सुरक्षा यात्राको लागि आधारभूत सल्लाह मध्ये एक हो
2 हवाईजहाजबाट यात्रा
3 तपाईंको कार को यात्रा को आराम
4 कस्तो यात्राको सिफारिस गरिन्छ?
5 स्पेन को माध्यम बाट एक राम्रो यात्रा
सुरक्षा यात्राको लागि आधारभूत सल्लाह मध्ये एक हो
यात्रा गर्न मात्र होइन, तर घरबाट बाहिर निस्कन मात्र। तसर्थ, हामीले लिनु पर्ने पहिलो कदमहरू जुन हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्दछ कि जब हामी यात्रा गर्छौं, हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नै पर्छ। एकातिर, मास्क यो पहिले नै ती सामानहरू मध्ये एक हो जुन सधैं हामीसँग जान्छ र निश्चित रूपले यसका सबै स्पेयर पार्ट्स विकल्पहरूको अन्त्य नहुने गरी। तर अर्कोतर्फ, हामी जेल र राम्रो हात धुने पछि छोड्न सक्दैनौं। मास्कको साथ सँगै जानका लागि अझ दुईवटा चरणहरू। निश्चित रूपमा तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईले यो बारे २ seconds सेकेन्डका लागि गर्नुपर्नेछ र सधैं हातको कुनामा पुग्नु पर्छ।
सर्वप्रथम, यदि तपाईं विमान लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हामीले माथि उल्लेख गरेका चरणहरू सुरु गर्नुपर्नेछ। धेरै जेल र हात धुने को उपयोग को रूप मास्क सामान्यतया उनीहरू अधिक बारम्बार आधारमा सिफारिस गरिन्छ। यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामी आफ्नो दूरी राख्न सक्दैनौं तर हामीले यस मामिलाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको निर्देशनहरूलाई सधैं पछ्याउनु पर्छ। ढिला आइपुग्न वा अलग सार्वजनिक यातायातमा हिंड्नबाट बच्नको लागि, तपाईं आफ्नो कार पार्किंगमा छोड्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईंको कार पूर्ण सुरक्षित हुनेछ र तपाईं केवल विमानमा चढ्नुपर्नेछ र तपाईंको गन्तव्यको आनन्द लिनुपर्नेछ। पार्कि ofको विचारलाई सँधै ध्यानमा राख्नुपर्दछ, किनकि तपाइँ दिनको लागि आरक्षण गर्नुहुन्छ, तपाइँको कार कति लामो हुन्छ र यो ग्यारेन्टी हो जसले तपाइँलाई केहि दिनको लागि सबै बिर्सनेछ।
तपाईंको कार को यात्रा को आराम
अवश्य पनि, धेरै अन्य व्यक्तिहरूले पनि छनौट गर्छन् जताततै कार लिनुहोस्। फेरि, तपाईलाई सँधै राम्रो पार्क छनौट गर्नु पर्नेछ यसलाई पार्क गर्न, तर यसले स्वतन्त्रता दिनेछ जब जब र जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ, समयतालिका बिना। थप रूपमा, सुरक्षा उपायहरू कम र धेरै धेरै भइरहेको छ। तपाईं आफ्नो सूटकेस र केहि लिन सक्नुहुन्छ तपाईंको गन्तव्य तिर सेट सेट गर्न। मास्क सधैं तपाईंको साथमा जान्छ र तपाईंको परिवारको। तर यस अवस्थामा, जेल वा हात धुने कुनै रोक्ने क्रममा वा कुनै पनि स्टेशनको बाथरूममा जाँदा प्रयोग गरिन्छ। यस्तो देखिन्छ कि यस वर्ष मोटर मोमहरूको माग बढेको छ, बचत गर्न अर्को विकल्प।
कस्तो यात्राको सिफारिस गरिन्छ?
सबैजनाले आफ्नो छनौट गर्नुपर्नेछ, यो सत्य हो कि ती सबै भित्र, सिफारिसहरू सधैं हुन्छन्। यस अवस्थामा, यो भनिन्छ कि घर बाहिर जहाँ हामी आफैंलाई धेरै व्यक्तिहरूको साथमा पाउँदैनौं, आधारभूत हुनेछ। त्यसकारण हामी जहिले पनि जोगिन सक्छौं धेरै पर्यटन क्षेत्र पहिचान गरियो र अन्य शहरहरू वा गन्तव्यहरू छनौट गर्नुहोस् जुन त्यस्तो नहुन सक्छ, तर त्यो पनि तिनीहरूको आकर्षण हुनेछ। त्यसोभए, हुनसक्छ हामी प्रकृतिले हामीलाई के दिन्छ भन्ने कुराको मजा लिनको लागि विशिष्ट र बन्द स्थानहरूमा पसेर जाँदैछौं।
स्पेन को माध्यम बाट एक राम्रो यात्रा
यस बर्ष यात्राको लागि अन्य आधारभूत सल्लाहहरू हाम्रो भूमिमा रहनु थियो। यो सत्य हो कि केही पोइन्टहरू अरू भन्दा बढी प्रभावित छन्, तर पनि हामी स्थानहरू खोज्न सक्छौं आराम अवधिमा रमाउनुहोस्। यी महिना पहिले को ब्रेक पछि, पत्ता लगाउन र हाम्रो कुनाहरु लाई जीवन दिन जस्तो केहि छैन। यसैले निश्चयनै तपाईंले एक भन्दा बढी अवसरहरूमा सुन्नुभएको छ कि हामीले यस मुद्दालाई बढावा दिनुपर्‍यो र हामी सहमत छौं। ठीक छ, समुद्र तटहरू वा सायद पहाडहरू, ग्रामीण घर र पैदल यात्राको लागि साइन अप गर्नुहोस्। निश्चित रूपमा तपाईंले त्यो स्थान पाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई थाहा थिएन र त्यसले तपाईंलाई अचम्मित पार्नेछ। तर सब भन्दा राम्रो चीज भनेको यो घरबाट केहि किलोमिटरमा फेला पार्नु हो जसले हामीलाई धेरै बचत गर्दछ र आराम गर्न मद्दत गर्दछ। यो एकैचोटि धेरै चीजहरू जस्तो देखिन्छ, तर यो साँच्चै व्यावहारिक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » कोरोनाभाइरस को समयमा यात्रा को लागी आधारभूत सल्लाह
केग्लियारीमा के हेर्ने
फिलिपिन्समा के हेर्ने